इजरायलमा भेटिएको यो हाडले बदल्दैछ मानव स्थानान्तरणको इतिहास :: a1nepal.com.np
काठमाडौं, २८ जनवरी । इजरायलको एउटा गुफामा पन्ध्र वर्षअघि भेटिएको मानव अवशेषबाट आएको नँया तथ्यले मानव स्थानान्तरणको इतिहासलाई बदल्नुपर्ने भएको छ । सो तथ्यले मानव स्थानान्तरण अहिले भएको रेर्कडभन्दा ५० वर्ष अघि भएको देखाएको छ ।
करिब पन्ध्र बर्ष अघि भेटिएको सो हाडलाई विभिन्न देशका प्रयोगशालामा थुप्रैपटक ‘कार्बनडेटिङ’ र परिक्षण गरियो । सोही परिक्षणको अन्तिम परिणाम बिहीबार सार्वजनिक भएको छ, जसअनुसार सो च्यापुको हाड १ लाख ७७ हजारदेखि १ लाख ९४ हजार वर्ष पुरानो भएको वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेका छन् । आधुनिक मानव इतिहासको सुरुवात ९० हजारदेखि १ लाख २० हजार वर्षपहिले अफ्रिकाबाट सुरु भएको मानिदै आएको छ । तर सन् २००२ मा उत्खननका क्रममा इजरायलको मिस्लिया गुफाभित्र भेटिएको च्यापुको हाड १ लाख ७७ हजारदेखि १ लाख ९४ हजार वर्ष पुरानो भएको पाइएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ ।
यदि अनुमान प्रमाणित भयो भने यसले मानवशास्त्रीहरूको मानव स्थानान्तरणको व्याख्या बदलिदिने छ। यसबाट हाम्रो पुर्खाको सुरूआती बसाइसराइको इतिहास नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘अफ्रिकाबाहिर आधुनिक मानवको सबभन्दा पुरानो अवशेष भेटिएको यो पहिलोपटक हुनसक्छ,’ विस्कनसिन विश्वविद्यालयका प्राग् ऐतिहासिक मानवशास्त्री जोन हक्सले भने।
खोजमा मान्छेको च्यापुको माथिल्लो हाड भेटिएको हो । यसमा ८ वटा दाँत छन्। सात वटा सामान्य दाँत छन् भने एउटा ‘कुकुर’ दाँत छ, जो अलिकति भाँचिएको देखिन्छ।
‘मलाई अचम्म लागेको छ। यो नयाँ अनुसन्धानले मानव उत्पत्तिमा नयाँ आयाम थपेको छ,’ जुलिया गलवे विथामले भनिन्। उनी लन्डनस्थित ‘न्याचुरल हिस्ट्री म्युजियम’ मा अनुसन्धान सहायक छिन् ।
मानवशास्त्री हक्स र अन्य अनुसन्धानकर्ताले भने यो खोजबारे व्याख्या गर्नुपूर्व होसियारी अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
‘हामीले आधुनिक मानव भने पनि उनीहरू यति धेरै आधुनिक थिएनन्,’ जिन–ज्याक्स हब्लिन्ले भने। उनी जर्मनीस्थित ‘म्याक्स प्ल्यांक इन्स्टिच्युट फर इभोलुसनरी एन्थ्रोपोलोजी’ को मानव उत्पत्ति विभागका निर्देशक हुन् ।
तेल अभिभ विश्वविद्यालयका प्राग ऐतिहासिक मानवशास्त्री इजरायल हर्सकोभिट्ज नेतृत्वको टोलीले यो अवशेष ‘माउन्ट कार्मेल’ को मिस्लिया गुफामा भेटाएको हो। यो टोलीले लामो समयदेखि चुनढुंगाका भीरमा गुफा बनाएर बसेका प्राचीन मानवबारे अध्ययन गरिरहेको छ। यो क्षेत्रमा भेटिएका केही सामग्री १ लाख २० हजारदेखि २ लाख ५० हजार वर्ष पुरानो भएको अनुमान पुरातत्वविदहरूले गरेका छन्।
डा। हर्सकोभिट्जले यसअघि पनि केही यस्ता चिज भेटेका थिए। सन् २०१५ मा उनले ५५ हजार वर्ष पुरानो मानव खप्पर फेला पारे।
पुरातत्वविदहरूले यो च्यापु हाड परीक्षण गर्न विश्वका धेरै ठाउँमा नमूना पठाए। ‘यो धेरै आधुनिक देखिन्छ। हामीलाई यसबारे मान्छेलाई बुझाउनै ५ वर्ष लाग्यो। उनीहरूले विश्वासै गर्न सकेनन्,’ डा। विन्सिटिन एभ्रोनले भनिन्।
मिस्लिया गुफामा भेटिएको यो अवशेषको रेर्कड यदि प्रमाणित भए यसले आधुनिक मानव इतिहास फेर्नेछ। अहिलेसम्म मानव बसाइसराइ अफ्रिकाबाट भएको मानिदै आएकोमा खोज पुष्टि भएसंगै आधुनिक मानिसले विभिन्न बाटा प्रयोग गरेर अफ्रिकाबाट बसाइसराइ गरेका थिए भन्ने देखिन्छ।
पत्नीको सहमतिबेगर राखिने यौनसम्पर्क वैवाहिक बलात्कार नहुने ‘गाजामा कोही निर्दोष छैनन्’ : इजरायली रक्षामन्त्री लिबरमान के इजरायलबारे साउदी अरबको धारणा बदलिएको हो ? इजरायली नागरिकलाई आफ्नो भूमिमा शान्तिपूर्वक बस्ने पूर्ण हक रहेको साउदी राजकुमारको भनाई प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी भएको फेसबुकद्वारा स्वीकारोक्ती, के भएको घटनामा .. सैन्य शक्तिमा अमेरिका पहिलो, चिन र भारत क्रमश तेस्रो र चौथो, इजरायल १५औं र नेपाल ९७औं स्थानमा इजरायली प्रधानमन्त्री वेन्जामिन नतान्याहु र प्रहरीबिच टस्सल उडान भरेको ५ मिनेटमै ७१ यात्रुसहितकाे रूसी विमान दुर्घटना भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीको “इक्जाम वारियर” नाम पुस्तक सार्वजनिक, के छ त मोदीको “इक्जाम वारियर” मा ? उत्तर कोरियाले आणविक आक्रमण गर्दै , प्रतिकार गर्दा पनि निकै खतरनाक ! अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेन्स इजरायली संसदमा बोलिरहदा अरव सांसदको अवरोध
← पद्मावतको व्यापार ‘आक्रामक’, अजयको हलमा तोडफोड	खचाखच दर्शकहरुको उपस्थितीमा राष्ट्रिय तामाङ घेदुङ इजरायलको आयोजनामा ल्होछार पर्व मनाइयो →